Nytaovolo2nde3-2012's blog - Page 4 - Ny taovolo Malagasy - Skyrock.com
# Posted on Monday, 26 November 2012 at 6:19 AM
Ny fomba hitahirizana ny kolontsain'ny taovolo malagasy
Ankehitriny, efa niova ny tontolo ao ny anterineto, ny finday, ny fahitalavitra. Samy manolotra fomba amam-panao maro karazana. Fahiny ohatra tsy mba nihety izany ny lehilahy fa lava volo, niova izany taty aoriana ka samy nibory volo. Nety tamin'ny malagasy tamin'izany ny nihety iavahany amin'ny vehivavy. Notoherina anefa ka vokatr'izany, taty aoriana ny lehilahy lava volo (rastà) ny vehivavy fohy volo, izay tondroina fa ratsy fitondran-tena. Araky ny fandrosoan'ny fotoana no androsoan'ny fomba fanao. Vokany, tsy misy izay marimaritra hiraisana ho enti-milaza fa izao no taovolo ofisialy.
Na izany aza mbola ezaka lehibe ny famerenana ny sain'ny olona hankafỳ ny fihaingon-drazany. Na dia tsy azo fefena aza ny fitsokan'ireny fihaingo tsy fanta-dikany ireny, dia azo atao tsara ny manolotra ny taovolo tena gasy hiditra any amin'ny fifaninana.
# Posted on Monday, 26 November 2012 at 5:40 AM
Marobe ny endriky ny taovolo nentin-drazana ka ny sasany amin'izy ireny dia tena tsy tsotra. Raha ny karazan'ny taovolo na randram-bolon'ny Razana malagasy no dinihina dia maro tsy tambo hisaina, indrindra amin'ny isam-poko samy hafa, izay tsy fanaon'ny taranaka ankehitriny intsony ny ankamaroany.
Somary natao ambanin-javatra anefa izy ireny ankehitriny ka tokony hiezaka ny Malagasy hamerina ny lazany.
# Posted on Monday, 26 November 2012 at 5:39 AM